पोखरामा ठगीको नयाँ धन्दा ! ग्लोबलको ‘नेटवर्किङ व्यापार’Gandaki Press
पोखरामा ठगीको नयाँ धन्दा ! ग्लोबलको ‘नेटवर्किङ व्यापार’
पुस ११, २०७८ १९:५७ मा प्रकाशित
पोखरामा केही समय अघि जागिर लगाइदिने भन्दै करोडौँ रुपैँया ठगि गरिएको थियो । जागिर मिलाउने नाममा सयौं युवालाई २ हजार ५ सयको दरले लिदैँ रसिद दिँदै जागिर मिलाइदिने भन्दै ठगि गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका थिए ।
पोखरामा अहिले निकै चलाखीको ठगि धन्दा चलिरहेको छ । जहाँ कम्पनीमा लगानी गर्न पाइन्छ त्यसको प्रमाण केहि हुँदैन । उल्दै अन्य व्यक्तिलाई ल्याएमा बोनस पाउँने आशा देखाइन्छ । दुःख गर्न पर्दैन भनिन्छ । रकम त तिरिन्छ तर तिरेको भन्ने कुनै प्रमाण फेला पारिँदैन । सबै काम पैसाबाटै हुन्छ ।
भारतमा व्यापक रुपमा रहेको ‘नेटवर्किङ व्यापार’को पोखरामा समेत सुरुआत भएको छ । काठमाडौंको बालाजुमा मुख्य कार्यालय स्थापना गरेर खोलिएको ‘ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रा.लि’ ले खाद्य पुरक बस्त्ु र कस्मेटीक उत्पादनहरुको आयात तथा निर्यात कोरोबार गर्ने इजाजत पाएको छ ।
पोखरामा भने कम्पनीको काम नै अर्को छ । जागिरको खोजिमा रहेका युवाहरुलाई सुरुमा जागिर दिने प्रलोभनमा पारिन्छ
पछि थोरै लगानी गरे धेरै मुनाफा हुने ठूलो आशा देखाइन्छ ।
पोखरामा ग्लोबल कम्पनीले ‘नेटवर्किङ व्यापार’ मात्रै होइन् कम्पनी विपरितका सामान बेच्दै आएको भेटिएको छ । कम्पनीले स्वास्थ्य सम्बन्धी औषधी देखाएर ठगि गर्दै आइरहेका छन् ।
कम्पनीबाट ठगिने मध्येका एक हुन धादिङका सुजय तामाङ । उनले १ लाख १५ हजार रुपैँया लगानी गरेको ८ महिना वितिसक्यो । कम्पनीले लगानी गरे बोनस आउने र मासिक रुपमा थोरैमा पनि १० हजार कमाउने बताएपछि उनले लगानी गरेका थिए ।
साना कदका भरर्खरै १८ वर्ष पुगेका उनी कालिका बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन संकाय पढिरहेका छन् । मुना गुरुङ मार्फत उक्त कार्यालयमा जोडिएका उनी फसिन्छन् भन्नेनै लागेको थिएन् ।
अहिले भने उनले पैसाको आश मारिसकेका छन । उनलाई कम्पनी गैरकानुनी रहेका कारण आफूहरुलाई समेत कारवाहि हुने हो की भन्ने चिन्ताले चुप बसेपनि कम्पनीको विरुद्धमा केहि पीडित सार्वजानिक भएपछि उनीपनि खुलेर बोलेका छन् ।
‘ पैसाको त आश नै मरिसक्यो । अब यस्तो कसैलाई पनि नहोस’ उनले भने,‘घरबाट मागेर ल्याएको हुँ पढन बसेको छु कसरी कमाउने र पढ्ने भएको अवस्थामा उल्टै फसिन पुगे । ’
म पनि पढाइकै शिलशिलामा लम्जुङ दुधपोखरी गाउँपालीका देखि आएका विक्रम वि.क को परिवारको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय छ । खेती किसानी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको परिवारको छोरा पढ्नका लागि पोखरा झरेपछि कामको खोजीमा थिए ।
‘पढ्नका लागि मलाई कामको खाँचो थियो । पढाइकै शिलशिलामा कम्पनीमा जोडिन पुगेँ’ उनले भने,‘आमा बुबाले किसानी काम गर्छन १३ हजार रुपैँया पठाइदिनु भएको थियो ।’ उनले बुबाआमाले १३ हजार रुपैँया के गरिस भनेर प्रश्न गर्दा कुनै जवाफ नरहेको उनी बताउँछन् ।
उनी जस्तै रुमी मगर समेत कम्पनीबाट ठगिएकी छिन् । आर्थिक अवस्था कम्जोर रहेको उनले ऋण गरेर कम्पनीमा १३ हजार रुपैँया लगानी गरिन् ।
फाइदा हुने र जागिर पाउने आसले जोडिएकी उनले आफ्नो माध्यबाट सुमी तामाङलाई पनि कम्पनीमा ल्याइन् । सुमीले ३५ हजार रुपैँया लगानी गरिन् । उनले पनि निशा नेपालीलाई ल्याइन् ।
निशाले १३ हजार रुपैँया लगानी गरिन् यसरी नै निशाले प्रकृति परियार र प्रकृतीले एलिशालाई कम्पनीमा जोडिन् । काम गरेको झण्डै १ वर्ष पुग्दा समेत तलब नपाएपनि उनीहरु ठगिएको भन्ने थाहा पाए ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार भने यो नेटवर्किङ विजनेस नै देखिएको छ । जाहेरी दर्ता भएमा ठुलो मात्रामा सलग्न रहेका व्यक्ति पक्राउ गर्न सकिने स्रोत बताउछ ।
उता पोखरामा कम्पनीकै प्रतिनिधि रहेका विजय गुरुङले भने नयाँबजार कम्पनीको समन्वय र स्विकृतमा नरहेको बताएका छन् । उनले आफूहरुमात्रै पोखरामा रहेको र नयाँबजार शाखाले कसरी काम गरिरहेको थाहा नभएको बताए ।
यस्मा आफूहरुले कसैलाई नठगेको उनले बताए । तर पनि गैरकानूनी रुपले कप्पनी चलिरहेको देखिएको छ । कम्पनी कानून सम्बत रुपमा चलेको १ वर्ष भएको उनले जानकारी दिए ।
कम्पनीबाट ठगिएको भन्दै सुमित्रा लामा, निशा थापा मगर, रुमी मगर, लक्ष्मी हिताङ र सुजय तामाङले संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा आवश्यक कारवाही गरी पाउँ भनी कम्पनीका सञ्चालक बसन्त पण्डित सहित ईश्वर नेपाली र विजय गुरुङ विरुद्ध निवेदन दिएका छन् । उनीहरु बाहेक राजु नेपाली भने पीडितहरुको सम्पर्कबाट टाढिएका छन् ।